Fairplay Club: N'ịkpali Sumlọ Nzukọ Egwuregwu Online. - jluis37.com
Fairplay Club: N’ịkpali Sumlọ Nzukọ Egwuregwu Online.
Posted by Lloyd Wilson On June 17, 2021 In My Blog
Ntụle dị mkpirikpi na-eme ka FairPlay Club bụrụ otu n’ime aha ndị kachasị egwu na ahịa Asia.
Dika ndi Fans ji nwayọ na-amalite imeghari na ụdị dijitalụ, ịkụ nzọ n’egwuregwu n’ịntanetị na-aga ọsọ ọsọ na njedebe. Site n’ọrịa na-efe efe na-eto uto nke ngalaba ahụ, ọtụtụ aha ndị ọhụrụ bịara ngwa ngwa simenti ntụpọ ha n’elu ụlọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, imirikiti n’ime ha enweghị ike ihie ma buckled n’okpuru nnukwu ibu nke ntanetị n’ịntanetị nke a hụrụ n’oge mkpọchi. Dika otutu n’ime ha akwadoghi nke oma ma ha enweghi akụrụngwa na nka iji wezuga onodu a, ha lara n’iyi ma puo ahia. N’etiti ọgba aghara a niile, otu nnukwu aha ndị ama ama pụtara na ụlọ ọrụ ahụ na ọ bụ FairPlay Club.
E guzobere FairPlay Club na 2020 n’okpuru ikike Curacao na nzaghachi ozugbo maka ngwa ngwa na-eto eto maka ikpo okwu ụlọ. Site na ebumnuche kasịnụ nke ịnye ndị egwu egwuregwu egwuregwu dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi, FairPlay Club enweela ike ịpụ na igwe mmadụ ma nyefee nkwa ya. Nke a bụ lee ka etu FairPlay Club siri nwee ọfụma karịa ọtụtụ asọmpi ahụ.
Udo nche: A na-ekesa ọtụtụ data njirimara nke onwe na nke dị nro na nyiwe ịkụ nzọ egwuregwu na ọ dị maka ndị na-ede akwụkwọ ntanetị iji mee ka ndị ọrụ ha nọrọ na nchekwa na ntanetị. Ozi banyere ugba data kwa ụbọchị emeela ka ndị mmadụ nwee obi abụọ. Agbanyeghị, site na FairPlay Club, a na-echekwa data onye ọrụ niile na ikpo okwu site na iji ngwaọrụ nchekwa ụlọ ọrụ na usoro nzuzo nke oge a iji belata ohere ọ bụla nke ịwụpụ data ma ọ bụ mmebi nzuzo. FairPlay Club kwenyesiri ike na nzuzo nke ndị ọrụ ya. Plọ ọrụ FairPlay anaghị enye ndị ọrụ ọ bụla ọzọ ihe ọ bụla data onye ọrụ ọ bụla belụsọ na ekwuru ya hoo haa na usoro na ọnọdụ nke ikpo okwu.
Ahụmịhe ịkụ nzọ na-enweghị ntụpọ: FairPlay Club nwere otu n’ime pọtụfoliyo kachasị mma na nke ahụ. Na-etu ọnụ n’akụkụ atọ dị iche iche, FairPlay Club na-eme ka mmeri na-atọ ụtọ site na usoro nkwụsị ọpụrụiche pụrụ iche. Nke mbụ, na ngalaba ahụ, FairPlay Club na-enye ndị ọrụ ya ohere ka ha nyefee mmeri ha ozugbo na akaụntụ akụ ha gosipụtara ozugbo ha kpochapụrụ na obere akpa ha, na-eme ka ndị egwuregwu nwee ike ịnụ ụtọ mmeri ha na ụbọchị egwuregwu na-agbakwunye ihe na-atọ ụtọ na nke ọma nke egwuregwu.
Iji nweta ozi ndị ọzọ nleta na – https://fairplay.club/ ma denye aha na https://fairplay.club/register. Mee ego mbu gi ka i nweta ego 100%! Gwa ndị enyi gị ma ritekwuo ego site na usoro ntinye aka!
I nwekwara ike iso FairPlay (@fairplay_india) na Instagram, Twitter na Facebook maka asọmpi na-akpali akpali na mmelite ndị ọzọ!
Etu esi atụkwasị obi na saịtị ntanetị?